विजनेश-फिचर – Online Khabar
१३ चैत २०७५, बुधबार
१. काठमाडौंमा यी हुन् ब्रुमरले सफा गर्ने सडक
२. दिशाको हट तस्वीरले बलिउडमा बवाल
३. रातभर ब्रुमरले बढार्नेछ काठमाडौंको धुलो !
४. त्रिभुवन विमानस्थललाई ‘बुटिक एयरपोर्ट’ बनाउन थालियो काम
५. बल नफ्याँक्दै आश्विनले बटलरलाई गरेको रन आउटले विवाद
६. निगमको वाइडबडी विमानस्थलको ट्याक्सी-वेमा अडि्कयो
७. माविको प्रअ हुन एमफिल, आधारभूत तहका लागि स्नातकोत्तर
८. राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
९. सुनिलका छोरासँग ताराको जोडी
१०. विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याए विषय शिक्षक बर्खास्त !
११. आजदेखि पाँच ब्रुमरले काठमाडौंमा धुलो बढार्ने
१२. माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा पैसा अभाव
घुस्याहा राजनारायण पाठकप्रति अख्तियार नरम !
चिनी कारखानामा मन्त्रीः कस्तो फोहोर ! कसैले देखे के भन्छन् ?
लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल एक सय नाघ्यो
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा पैसा अभाव
थाइल्याण्डको पट्टायामा पियाजियो थ्री ह्विलर्सको कन्फरेन्स
बुद्ध एयरको सफलता : कृषि नबिर्सेको नम्बर वान एयरलाइन्स
११ चैत, काठमाडौं । व्यावसायीक जीवनमा सफल हुन निकै कठिन हुन्छ तर, केही मानिस ती कठिनाई पार गरेर सफल त हुन्छन् र उदाहरणीय बन्छन् । व्यावसायीक चुनौती स्वीकार्नेहरु कोही आफूले चाहेकै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्छन् त कोही नसोचेको क्षेत्रमा अब्बल सावित हुन पुग्छन् । भनिन्छ सफलताको पहिलो खुडि्कलो असफलता हो । सफल हुन गरिएको पहिलो […]
10 १ दिन
लगानी सम्मेलनका लागि ७१ परियोजना तयार
१० चैत, काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि ८ वटा प्रस्ताव थप गरिएको छ । यसअघि ६३ आयोजना तयार पारिएकोमा पछि ८ परियोजना थप गरिएको हो । लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले ७१ वटै परियोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको जानकारी दिए । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५३ […]
डेढ वर्षभित्र नेपालको बिजुली उत्पादन दोब्बर !
४ चैत, काठमाडौं । आगामी साढे ३ वर्षमा नेपालले करिब २४ सय मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । हाल नेपालसँग १ हजार मेगावाटको हारारहाीमा मात्रै छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार निर्माण सुरु भएका आयोजना समयमै सकिए आगामी डेढ वर्षभित्रै नेपालको विजुली उत्पादन क्षमता दोब्बर हुनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६भित्रै २ सय ८७ […]
२० वर्षमा विदेशी लगानी : खर्बौंको प्रतिवद्धता, आयो १७० अर्ब
३ चैत, काठमाडौं । महाभूकम्प गएको एक वर्षपछि ०७३ फागुनमा सरकारले ठूलो तयारीका साथ लगानी सम्मेलन गर्‍यो । त्यसमा सोचेभन्दा बढी अर्थात १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आयो । तर, दुई वर्षपछि कति लगानी आयो भनेर खोज्दा निराशाजनक तथ्यांक हात लाग्छ । उद्योग विभागका अनुसार सम्मेलनमा घोषणा भएर भित्रिएको लगानी केही […]
२ चैत, काठमाडौं । सरकारले १५-१६ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि नेकपा विप्लब समूहमाथि प्रतिवन्ध लगायो । यसले लगानीकर्तालाई नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था सदृढ छ भनेर आश्वस्त पार्‍यो कि अझै द्विविधामा पार्‍यो ? पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल यो कदमले लगानी सम्मलेनमा झन प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने देख्छन् । सरकार लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने विषयमा केन्द्रित […]
विज्ञ भन्छन्-लगानी सम्मेलनमा उधारो तमसुक नगरौं
२ चैत, काठमाडौं । चैत्र १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलन कति सफल होला ? यसबारेर विभिन्न मतहरु प्रकट भइरहेका छन् । विज्ञले विगतमा जस्तो प्रतिवद्धता मात्रै लिने गरी उधारो तमसुक नगर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले […]
३० फागुन, पोखरा । कुनै पनि ठाउँको विकास र समृद्धि थाहा पाउन धेरै कुरा आवश्यक होलान् । तर, मुख्यतः ३ कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्, सुशासन, सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार । ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा लिएर अघि बढेको महानगरकोे स्थिति बुझ्न ‘पोखरा सभागृह’लाई हेरे पुग्छ । महानगरको एकमात्र सभा तथा बैठक हल देखिनेछ, अस्तव्यस्त, भताभुंग र लथालिंग । […]
10 २ हप्ता
लघुवित्तलाई विकास बैंकमा ‘अपग्रेड’ योजना कति सान्दर्भिक ?
२९ फागुन, काठमाडौं । मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकाले घटाउनु पर्ने विषय अहिले पनि चर्चामै छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गर्‍यो। जसमा आंशिक मात्रै सफलता मिल्यो । पुँजी वृद्धिको रणनीतिले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्यो तर क’ वर्गका […]
२९ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय हकप्रद सेयर बिक्नै मुश्किल हुन थालेको छ । दोस्रो बजारमा महंगो सेयर पनि लगानीकर्ताहरुले नकिन्दा कम्पनीहरुले लिलामीको माध्यमबाट यस्तो सेयर बिक्री गर्ने गरेका छन् । आजको मितिमा पनि २ वटा कम्पनीहरुको हकप्रद सेयर लिलामीमा रहेको छ । दुई वटा फाइनान्स कम्पनी र एउटा निर्जिवन बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर बिक्री […]
चितवनमा पर्यटक नबढ्नुका ६ कारण
२८ फागुन, चितवन । सरकारले दिएको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक भित्रिए । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले खुसीयालीमा ‘केक’ पनि काटे । सन् २०२० मा २५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । देशको राजधानी काठमाण्डौं पहिलो, पयर्टकीय नगरी पोखरा दोस्रो र चितवन तेस्रो […]
निगमको जहाज मर्मत ठेक्कामा लेखा समितिले देख्यो खोट !
२७ फागुन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको पीबीएच -इन्जिन पार्टपूर्जा) सेवा लिन गरिएको खरिद सम्झौता रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । टेन्डरमा सहभागी लुफ्थान्सालाई प्रभावग्राही नरहेको जनाउँदै बढी बोलकबोल गर्ने ‘एजे वार्टर’सँग निगमले ८ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । निगममा सञ्चालक समितिका सदस्यसँग छलफल गरेर समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै कम्पनीहरुको […]
२७ फागुन, काठमाडौं । आधुनिक नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो मुद्रा (नोट) समेत विदेशमै छाप्दै आएको छ । विदेशमा नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ । त्यसैगरी एमआरपी पासपोर्ट समेत नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै देशमा छाप्न सकिरहेको छैन । नेपालले आफ्नो मुद्रा र राहदानी आफैं छाप्छ र अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको धेरै वर्ष […]
२७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले वैशाख १ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बुटिक एयरपोर्ट’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनसँगै ‘बुटिक एयरपोर्ट’ को सरकारी योजनासमेत मुर्झाएको छ । वैशाख १ आउन दुई महिना पनि बाँकी नरहँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यसका लागि विभिन्न कामहरु टेन्डर नगरी सीधै गराउने गरी […]
प्रतिवद्धतामात्रै ओइरिने क्रम तोड्ला लगानी सम्मेलनले ?
२६ फागुन, काठमाडौं । ०७३ साल फागुनमा भएको लगानी सम्मेलनमा २ खर्बको प्रतिवद्धता जुटाउने लक्ष्यलाई माथ खुवाउँदै विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्बको लगानी नेपाल ल्याउने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसपछि दुई वर्ष बित्यो, लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका धेरै लगानीकर्ता सरकारको सम्पर्कमा आएनन्, आएका थोरै मध्येले पनि लगानी ल्याएनन् । मुस्किलले २ खर्ब लगानी भित्रिने प्रराम्भिक प्रक्रियामा […]
‘गाउँमा होमस्टे खोलेका छौं, टुरिस्ट पठाइदेऊ’
२५ फागुन, रामकोट (बन्दीपुर) । पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बुधवार र बिहीवार तनहुँको दुर्गम गाउँ रामकोटमा लगातार पानी पर्‍यो । बिहीसरा र उनको टोलीले एक महिनादेखि गरेको तयारी कुबेलामा परेको बैमानी झरीले बिगारिदियो । गाउँभरि हिलो र पानीको गजगजी थियो । त्यहीबेला देशका पर्यटन मन्त्री, चर्चित व्यवसायी र उड्ययन प्राविधिकहरु बोकेको जहाज पूर्वतिर दुर्घटना भएको […]
10 ३ हप्ता
विकास खर्चमा ईश्वर पोखरेल ‘फस्ट’, गोकर्ण विष्ट ‘लास्ट’
२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतवाला सरकारका लागि विकास बजेटको परिचालन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चिन्ता छ, विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् । हुन पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६को पहिलो ६ महिनासम्म प्रमुख विकासे मन्त्रालयहरुको विकास खर्चको दर हेर्दा निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ […]
२१ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा मूलतः व्यापारिक र राजनीतिक परिवारका सदस्यहरुले अब्बल उद्योगी-व्यवसायी घरानाको पहिचान बनाएका छन् । यसमा पनि दुईखाले छन्- आयात व्यापारमा अब्बल बनेका व्यापारिक घराना र उद्योग खोलेर उँभो लागेका उद्योगी घराना । आयात व्यापारले धेरै राजश्व तिरे पनि वैदेशिक व्यापार घाटा बढाएको छ भने उद्योगले रोजगारी सिर्जनाका साथै व्यापार घाटा घटाउन […]
कस्तो छ अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको नेपाली स्याटेलाइट ?
२१ फागुन, काठमाडौं । अन्तरिक्षमा पुगेको ६ दशकपछि नेपालको आफ्नो भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अन्तरिक्षमा पुग्ने भएको छ । जापानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको फेलोसिपमा क्युशु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) मा भूउपग्रह प्रविधिमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले तयार गरेको स्याटेलाइट वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरिँदैछ । यो नानो स्याटेलाइटको नाम ‘नेपाली स्याट वान’ राखिएको छ । अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित वल्लोप्स […]
सेयर बजारले नरुचाएको कम्युनिष्ट सरकार
२१ फागुन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । ३ फागुन ०७४ मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने पक्का भएपछि अघिल्लो दिनबाट घट्न थालेको सेयर बजारमा अझै सुधार देखिएको छैन । अनौठो के भने ओली प्रधानमन्त्री बनेको दिन चाँहि सेयर बजारमा हल्का सुधार आएको थियो । त्यसलाई […]
२१ फागुन, चितवन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालमा १६ अर्ब ५८ करोड र आ.व. ०७४/७५ मा १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वदेशी औषधि कारोबार भएको तथ्यांक छ । ०७३/७४ मा नेपालमा २१ अर्ब ९५ करोड र ०७४/७५ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विदेशी औषधिको कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाली औषधि बजार करिब […]
जाग्यो रानीपोखरी पुनर्निर्माणको आश
२० फागुन, काठमाडौं । शिलान्यास भएको तीन वर्षसम्म अलपत्र रहेको रानीपोखरीमा सोमबार विहानै महिलाहरुको एउटा डफ्फा धमाधम झार उखेलिरहेको थियो । केही पुरुषहरु उनीहरुलाई सघाइरहेका थिए, जसमध्ये एक थिए भक्तपुरका कृष्णप्रसाद दुमरु । उनी पेशाले कालिगढ हुन् । उनकै नेतृत्वमा भक्तपुरको भाजुपोखरी उपभोक्ता समितिमार्फत जिर्णोद्धार भइरहेको छ । पराम्परागत शैलीबाट भाजुपोखरी जिर्णोद्धार गरेको देखेपछि पुनर्निर्माण […]
123 … 292 >>